Archives des Karemy - Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany - MADAGASIKARA
Étiqueté : Karemy
Ry rahalahy sy anabavy malala, Raha nilaza mialoha tamin’ny mpianany ny fijaliany sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany ho velona, ho fanatanterahana ny sitrapon’ny Ray i Jesoa, dia nanambara tamin’izy ireo ny hevitra lalina...
Tari-dalana ho an’ny fandinihan-tena
Mamporisika antsika handray matetika ny sakramentan’ny fampihavanana ny Fiangonana. Indro misy tari-dalana hiatrehana izany. Isaorana ny ZENIT amin’ny dika teny. Ireo fanontaniana anombohana ny fandinihan-tena Manao ahoana ny toem-panahiko rehefa handeha hikonfesy ? Maniry...
Tari-dalana ho amin’ny karemy
Loharano : Zenith Tohizantsika anio ny fifampizaràna mikasika ny laretirety nataon’ny Ray masina Fransoa sy ny mpiara-miasa aminy. Izay iray vatsy iray aina Ny sakafo farany niarahan’i Jesoa sy ny mpianany no nanompanan’i mompera Michelini...
Tari-dalana ho an’ny karemy
Nanao laretirety ny Papa Fransoa sy ny mpiara-miasa aminy nanomboka ny alahady 5 martsa teo. Indro ifampizaràna amintsika ny tari-dalana nentin’i mompera Giulio Michelini. Fandinihana voalohany Isan’ireo olona tokony handray ny Evanjely indray isika...